【Bauhinia Street】City View Executive Apartment丨Small duplex 1.5m丨Azikho izilwane ezifuywayo (Sandun Metro Station of Metro Line 2/Zhejiang University Zijingang/Affiliated to Normal University) - I-Airbnb
【Bauhinia Street】City View Executive Apartment丨Small duplex 1.5m丨Azikho izilwane ezifuywayo (Sandun Metro Station of Metro Line 2/Zhejiang University Zijingang/Affiliated to Normal University)
Ikamelo e-ifulethi ibungazwe ngu-慧梵梵和管家姐姐们
U-慧梵梵和管家姐姐们 Ungumbungazi ovelele
[Isingeniso] Sawubona, wamukelekile e-Hangzhou! Ngingumkhiqizo wefulethi lase-Hangzhou "I-Huifan Zhixuan Apartment". Siyiqembu lentsha elisafufusa. Sithemba ukusebenzisa ubuqotho bethu ukuzuza ukwaneliseka kwakho. Manje sesivule izitolo ezimbalwa e-Hangzhou, ikakhulukazi simatasatasa efulethini eliqashisayo nsuku zonke kanye nendawo yokulala nesidlo sasekuseni, ehlukile kunendawo yokuhlala yendabuko, futhi inikeza abathandekayo bethu okuhlangenwe nakho kwangasese!
[Isikhumbuzi] Ngenxa yokuthi siyiqembu eliqalayo, osokhaya basebancane uma kuqhathaniswa, uma kukhona ukushiyeka, ngithemba ukuthi uyacabangela. Wonke umuntu usemncane. Yebo, sizokwamukela ukugxekwa ngaso leso sikhathi uma senza amaphutha. Sizohlinzeka ngezidingo zokuhlala ezingabizi kakhulu, izindlu zangasese eziyisisekelo zizohlinzekwa, kunezindlu eziningi, futhi kuzoba nomehluko othile ekuqondisweni komhlobiso othambile kusuka ezithombeni, kodwa isipiliyoni esiyisisekelo singaqinisekiswa. Kodwa-ke, ngenxa yenani elilinganiselwe, kungase kungenzeki ukunweba ukuboniswa kwezinsizakalo ezifana nokudla, izilwane ezifuywayo, nezinsiza zobuchwepheshe. Isibonelo, ikhishi ngokuvamile lihlinzeka ngezipheki zokungeniswa futhi alihlinzeki ngezinye izinto. Ngiyethemba ukuqonda .
[Incazelo] Ngemva kokubhuka, kuzoba nomphathi wezitsha okhethekile ozokulungiselela ukuhlala kwakho. Uma unemibuzo, sicela uxhumane nomphathi wakho kuqala, futhi uzokunikeza izinsizakalo zokuphendula eziyisisekelo. Uma unesevisi noma izinkinga zekhwalithi, bese uthintana nomnikazi wendawo ukuze ucutshungulwe.
[Isengezo] Ngikufisela ukuhlala okujabulisayo! Thanda ukuphila kuze kube phakade!
4.87 · 56 okushiwo abanye
U慧梵梵和管家姐姐们 Ungumbungazi ovelele